Enwere ihe ọ bụla dị mkpa banyere SEO maka ọrụ ebere? Ị nwere Search Engine Optimization Starter Guide?
Nyocha njirimara nke search engine (ma ọ bụ SEO) bụ ọrụ gbasaa nke na-amụbawanye ma: mma na oke nke okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ site na nsonaazụ search engine. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, SEO bụ maka ime ka ndị na-ege ntị nwere ike ịchọta ihe ọmụma ahụ.
SEO nwere ike ijide ya site na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ iji nye - ma eleghị anya, e nwere onye nọ n'ebe ahụ na-achọsi ya ike. Site na atụmatụ SEO dị irè, atụmanya nwere ike ịchọ ọchụchọ ndị dị mkpa na Google nke na-adọta ha na azụmahịa gị. Ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na azụmahịa ọ bụla nwere ike inweta SEO, ndị ọkachamara na-ahụ maka mgbapụta achọpụtawo na ụfọdụ ọrụ, gụnyere ọrụ ebere, nwere ike irite uru na njikwa search engine karịa ndị ọzọ.
Dịka a kpọtụrụ aha n'elu, SEO bụ isi nzube bụ ime ka ndị ịchọrọ ịchọtara gị ohere ahụ. Maka ndị ahụ na-arụ ọrụ ebere, nke ahụ pụtara ịnweta ndị nwere mmasị ịkwado otu ihe ahụ dị ka gị, na njikere ịme onyinye iji kwadoo ọrụ gị.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe dị iche iche gbasara SEO maka ọrụ ebere, ị ga-agbadoro ndụmọdụ ndị SEO depụtara n'okpuru. Ha ga - enyere gị aka ịghọta ihe mere SEO ji dị mkpa maka ụlọ ọrụ dị otú ahụ nakwa kọwaa ebe ị ga - amalite mgbe ị na - emepụta mkpọsa SEO maka ọrụ ebere gị.
Search Engine Optimization Starter Guide for Charity Organizations
Ihe Mere Nzuzo Gị Ji Kwesịrị Ịbanye na SEO:
Nwelite ego: Onyinye dị n'Ịntanet bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji nye onyinye. SEO bụ ụzọ kasị mma mmadụ nwere ike isi na-eleta ndị ọbịa ma ọ bụ na-edegharị ya ma ọ bụ n'èzí gaa na ibe weebụ.
Meewanyewanye mmata: Ebe nrụọrụ weebụ na-ahụ maka ebe a bụ ohere zuru oke nke nwere ike igbasa okwu banyere nzukọ ya, na-enye ndị mmadụ ohere ịhụ onwe ha ihe niile gbasara.
Wụlite ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ihe: Usoro atụmatụ SEO emeziri nke ọma na-enyere aka ịmepụta aha ọma. Ọ na-arụ ọrụ dịka ndị a: mgbe ọrụ ebere gị dị mfe ịchọta n'ịntanetị, ndị mmadụ nwekwuo obi ike n'ihe ị na-eme.
Ihe I Kwesịrị Ịtụle Tupu Ịtọlite ​​Obere Chario SEO Mgbasa Ozi
Kpọọ Ntị gaa na Keywords
I kwesịrị iji nlezianya họrọ gị lekwasịrị Keywords. Họrọ ndị na-akọwa ihe dị n'ime ya. Chee echiche banyere atụmanya gị, gịnị ka ha ga-achọ ịchọta ọrụ ebere gị. Gbalịa ịhọrọ ndị echefu echefu, nke mere na ndị mmadụ nwere ike ịchọta Google gị nzukọ ma kọọrọ ndị ọzọ banyere ya.
Mpaghara ebe ihe gbasara
Kọwaa ebe ọrụ ebere gị. Mee ka ndị mmadụ mara ebe nzukọ gị na-arụ ọrụ. Cheta, ebe dị oke mkpa. Na mbụ, egbula oge na-agbalị ịkwalite elu n'èzí nke mpaghara gị. Ilekwasị anya na mgbalị gị na SEO ga-aba uru.
Nọgide Na-enwe Ọganihu Gị Ọhụrụ na Bara Uru
ọdịnaya kwesịrị ekwesị bụ isi kachasị gị mkpa. A na-atụ aro ya ka ị jupụta ebe ị na-eji ọdịnaya ọhụrụ, nke na-enye aka ma na-atọ ụtọ n'oge niile. Buru n'uche, Google na ụlọ ọrụ nkwụghachi ụgwọ engines ndị ọzọ na ọdịnaya bara uru site n'ịkwalite ogo ha dabere na ihe ndị dị ka:
Oge eji na saịtị;
Njikọ ndị dị n'èzí gaa na saịtị ahụ.
Nakwa, jide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị na-ahụ maka ọrụ ebere bụ nke kachasị mma na nke na-ezighị ezi maka ịmatakwu njirimara onye ọrụ.
Gaa maka Charity gị SEO
Olileanya na ị nwere mmasị na nduzi nchịkọta njikwa ihe nchọgharị a.Rịba ama na ndị a bụ naanị atụmatụ ole na ole iji nweta ogo ogo SEO n'ejighị oke oge na ego Source . Malite na-eke gị ebere SEO mkpọsa ugbu a na-ahụ ihe na-eme gị rankings ke otu ọnwa!